Kukwanisa kubudisa, kugadzira uye kugadzira zvakawanda zve2,4-Dichloro-5- (trifluoromethyl) pyrimidine (3932-97-6) nehutano hwehutsika pasi peCGMP
5-Trifluoromethyl-uracil inowanikwa kuburikidza neklorinating thymine pasi pemamiriro akaoma, nekuwedzera kukonzera 2,4-dichloro-5-methyl-pyrimidine iri pasi pemamiriro ezvinhu akadai kupa 2,4-dichloro-5-trichloromethylpyrimidine, achiita izvi nechirwere che fluorinating kupa 2,4 -fluorinated and / or -chlorinated 5 trifluoromethylpyrimidines uye kuisa izvi kune hydrolysis. Iyo inoverengeka yemakemikari inogadzirwa 2,4-dichloro- 5-trichloromethylpyrimidine uye 2,4-difluoro-5-trifluoromethylpyrimidine inowanikwa munguva iyi. Zvine zvinyorwa zvinonzi 5- (trifluoromethyl) pyrimidine dzinoshanda sepakati pemiti yemishonga uye agrochemicals uye sepakati pemashizha emagetsi uye nzira dzokugadzira zvakafanana. 2,4-dichloro-5- (trifluoromethyl) pyrimidine inobatwa ne 2,2,2-trifluoroethanol, benzyl alcohol, kana benzenethiol kuti iwane 2- (2,2,2-trifluoroethoxy) -4-chloro-5- (trifluoromethyl) pyrimidine, 2-benzyloxy-4 -chloro-5- (trifluoromethyl) pyrimidine, 2,4-bis (2,2,2-trifluoroethoxy) -5- (trifluoromethyl) pyrimidine, kana 2-chloro-4-phenylthio-5- (trifluoromethyl) pyrimidine.
Ichi chigadzirwa (s) chinogara pane kambani ye APICMO. Kana uri kutarisa peji ino somunhu asina kubhadhara, mutengo (s) unoratidzirwa ndiNhamba yeZveruzhinji. Kuti uone kutengesa kwako, pinda mukati uchishandisa nhamba yako yekodha, kana kuti iwe unyoresa waunoshandisa kuburikidza neimwe yemakambani eChipatimendi Chebasa. Kuti uise mutemo, taura APICMO Customer Service.
MDL Nhamba MFCD03426408
Kemikari Zita kana Nyaya 2,4-Dichloro-5- (trifluoromethyl) pyrimidine
Physical Form Bvisa mvura isina mvura
Molecular Formula C5HCl2F3N2
ruvara Isina kuchena kuti iite bhuru
2,4-Dichloro-5- (trifluoromethyl) pyrimidine (3932-97-6) Kuchengetedza nekubata
(3932-97-6) Tsanangudzo yenjodzi:
◆ Kufa kana ukamedza.
◆ Zvinokonzera kutsamwa kweganda
◆ Zvinokonzera kusuruvara kweziso zvakakomba
2,4-Dichloro-5- (trifluoromethyl) pyrimidine Nyaya yemutemo:
◆ Geza ganda zvakanaka mushure mokubata.
◆ Usadya, kunwa kana kusvuta kana uchishandisa chigadzirwa ichi.
◆ Pfeka magasivha ekudzivirira / kudzivirirwa kweziso / kudzivirira chiso.
◆ KANA WAKASIMBA: Nenguva pfupi fona POISON CENTER kana chiremba / chiremba ..
◆ KANA MAMWE EYES: Isai nokungwarira nemvura kwemaminitsi akawanda. Bvisa manotsi lenzi, kana zviripo uye zviri nyore kuita. Rambai muchigadzira.
◆ Kurapa kwakananga (tarisa kuwedzera mamwe mazano emubatsiro epakutanga ino).
◆ Bvisa muromo.
◆ Kana kutsamwa kweziso kuchiripo: Tsvaga mazano ekurapa / kutarisa.
◆ Chengetedza yakavharwa.
◆ Dzinga zviri mukati / mudziyo kune imwe nzvimbo inogamuchirwa doro
Ichangobva kufambira mberi mune zvinodhaka zvinokonzerwa nemishonga uye inhibitor mukurwisana neishmaniasis
Lesihmaniasis chimwe chezvinyorwa zvisingakanganwiki zvirwere zvinotonhora zvinokonzerwa neparasite ye genus Leishmania. Chirwere chacho chine maitiro emamwe emakiriniki uye fomu yeva visceral inonzi inouraya ...
Synthesis uye anticancer basa rokuongorora inovelisa azacalix  Arene  pyrimidines
Mutsara weAzacalix  Arene  pyrimidines yakagadzirwa, uye yakaongororwa nokuda kwezvinhu zvavo zvinopesana nemaitiro anopesana neA549, MCF7, SH-SY5Y uye CNE vanhu vane kenza yesero in vitro kuburikidza nekushandisa CCK-8 kuedza ...
2,4-Dichloro-5- (trifluoromethyl) pyrimidine (3932-97-6) Kurayira Kukuru & Kutengo: